आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेट (पूर्णपाठ) - ढोरपाटन पोष्ट
२०७८ जेष्ठ १५, शनिबार १९:४३
नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ का लागि लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक आयव्यय विवरण प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी गराउनुभएको हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १ खर्ब ७२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बढी आकारको बजेट ल्याएको छ ।
वजेटको पूर्णपाठ यस्तो छ :
संविधानको व्यवस्था बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन भएको हुनाले राजस्व र व्ययको अनुमान संघीय संसदमा पेश गर्न सम्भव भएन। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट विनियोजन अध्यादेश, आर्थिक अध्यादेश र राष्ट्रऋण उठाउने अध्यादेश जारी भइसकेका छन्। यी कानूनहरूमा उल्लिखित मुलभूत विषय आय व्ययको वक्तव्यमा समावेश गरेको छु ।
कोभिड- 19 महामारीको दोस्रो लहरको जोखिम बढ्दै जाँदा हाम्रा सामु चुनौतीहरू थपिएका छन्। संक्रमण जोखिम कायम रहने अवधि र यसको प्रभाव अझै यकिन हुन सकेको छैन। सङ्कटको यस समयमा प्रत्येक नेपालीको जीवनरक्षाको अभिभारालाई सरकारले सर्वोच्च प्राथमिकता दिएकोछ। सरकार महामारीकै बीचमा पनि स्वास्थ्य सजगता अपनाउँदै आर्थिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिन प्रतिवद्ध छ।
वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा हामीले विकास निर्माण र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेका छौं। दशकौंदेखि सङ्कटग्रस्त मेलम्ची खानेपानी आयोजना सञ्‍चालनमा आएकोछ। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना छिट्टै सम्पन्‍न हुँदैछ। ढलेको धरहरा उठेसँगै सबै नेपालीको मनोवल उच्च भएकोछ। सडक पूर्वाधार निर्माण, जलविद्युत उत्पादन, भुकम्पपछिको पुनर्निर्माण र आर्थिक पुनरूत्थानमा प्राप्&zwj;त नतिजा उल्लेखनीय छन्। सहि नीति, सक्षम नेतृत्व, दृढ आत्मविश्‍वास र समर्पणका साथ अघि बढ्दा विकासको अभियानलाई तीव्रता दिन सकिन्छ भन्‍ने सकारात्मक सन्देश सम्प्रेषण गर्न हामी सफल भएका छौं।
आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान, चुनावी घोषणापत्र, पन्ध्रौ योजना, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा, विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्‍नति हुने अठोट र दिगो विकास लक्ष्यलाई महत्वपूर्ण आधारको रुपमा लिएको छु। सबै प्रकारका सामाजिक, आर्थिक विभेदको अन्त्य गर्दै विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायको यात्रालाई थप गतिशील बनाउने र समाजवादको आधार निर्माण गर्ने उद्देश्यबाट निर्देशित भएको छु। जनप्रतिनिधि, निजी क्षेत्र, वुद्धिजीवी, पेशाविद् र आमनागरिकबाट प्राप्त सुझावलाई समेत यथोचित महत्व दिएको छु आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
स्वास्थ्य जोखिमका वाबजुद आपूर्ति श्रृङ्खला नियमित गर्न सकिएकाले मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा छ। गतवर्ष ६.७ प्रतिशत रहेको उपभोक्ता मुद्रास्फीति चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा 3.1 प्रतिशतमा सीमित भएकोछ। शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहेको, विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि भएको, विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्त रहेको, कर्जा र निक्षेपको वृद्धिदर सकारात्मक रहेको, पुँजी बजारमा कारोबार वृद्धि हुँदै गएकोछ।तथापि, कोभिड- १९ को दोस्रो लहरका कारण यी परिसूचकमा आगामी दिनमा चाप पर्ने अनुमान छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो9महिनामा निर्यात 20.2 प्रतिशतले र आयात 13.1 प्रतिशतले बढेकोछ। व्यापार घाटामा कमि आई शोधनान्तर स्थिति रु. ४२ अर्व ५४ करोड बचतमा रहेकोछ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति रु. १४ खर्ब ३३ अर्व २७ करोड पुगेकोछ।
चालु आर्थिक वर्ष वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा 94.8 प्रतिशत राजस्व संकलन हुने अनुमान छ। वैदेशिक अनुदान रु. 27 अर्ब6करोड र वैदेशिक ऋण रु. 1 खर्ब 65 अर्ब 10 करोड परिचालन हुने संशोधित अनुमान छ। आन्तरिक ऋणतर्फ रु.2खर्ब 23 अर्ब परिचालन हुने अनुमान गरिएकोछ। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
उत्तरदायी शासकीय व्यवस्था, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
अब म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणको विवरण प्रस्तुत गर्दछुः
वर्तमान जनउत्तरदायी सरकार सबै नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइलाई कोभिड- 19 विरुद्ध निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउन प्रतिवद्ध छ। यस सन्दर्भमा, विश्‍वका थोरै मुलुकहरूसँगै नेपालले पनि खोप अभियान शुरु गरेको र दक्षिण एसियामा खोपको दोस्रो प्रयोगकर्ता मुलुक भएको तथ्य स्मरण गर्न चाहन्छु। खोप लगाउन बाँकी सवै उमेर समुहका नेपालीलाई शिघ्रातिशिघ्र खोप सुनिश्‍चित गर्न सम्पूर्ण स्रोत र सामर्थ्यको उच्चतम प्रयोग गर्दै उत्पादक देश तथा कम्पनीबाट खोप प्राप्त गरी खोप अभियानलाई पूर्णता दिइनेछ। खोप व्यवस्थापनका लागि रु. 26 अर्ब 75 करोड छुट्याएको छु।
मनमोहन कार्डियो भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट केन्द्र, त्रिभुवन विश्‍वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, विपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल, जिपी कोइराला राष्ट्रिय स्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र, सुशिल कोइराला प्रखर अस्पताल, रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार निर्माण गर्न रु. १ अर्व २८ करोड विनियोजन गरेको छु।
वीर अस्पतालको विस्तारित सेवा सञ्‍चालन गर्न भक्तपुरको दुवाकोटमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अत्याधुनिक सुविधासम्पन्‍न अस्पताल निर्माण गरिनेछ। तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्‍न गरी सेवा सञ्‍चालन गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन लगायत पूर्वतयारी कार्य सम्पन्‍न गरिनेछ। भौतिक पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापन एकैसाथ पूरा गरी अस्पताल सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ। यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरी छुट्टै आयोजना कार्यालय मार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। काठमाण्डौको जडीबुटीदेखि अस्पताल निर्माणस्थलसम्म मनोहरा नदीको दुवै किनारामा चार/चार लेनको करिडोर सडक निर्माण गरिनेछ।
गुणस्तरीय खानेपानी सेवा सुनिश्‍चित गरी नागरिकको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन नेपाल खानेपानी संस्थान, काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र स्थानीय तहले गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई वितरण गर्ने मासिक 20 हजार लिटरसम्मको खानेपानी महसुल यसै महिनादेखि छुट दिई निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छु ।
साझेदारी, सहलगानी लगायत सबै प्रकारका खानेपानी तथा सिँचाइ उपभोक्&zwj;ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युतको डिमान्ड शुल्क र महसुल पुरै छुट दिने व्यवस्था गरेको छु। निषेधाज्ञा अवधिभर घरायसी तथा साना विद्युत उपभोक्तामध्ये मासिक 20 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई शतप्रतिशत, मासिक १५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई 50 प्रतिशत र २५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई 30 प्रतिशत महसुल छुट दिइनेछ। उत्पादनमूलक उद्योग, होटल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत डिमान्ड शुल्क छुट दिने व्यवस्था मिलाइनेछ।
अब म श्रम, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्तुत गर्दछुः श्रम र रोजगारी सिर्जना
राज्यका सबै अङ्गमा लैङ्गिक समानताको नीति अवलम्बन गरिनेछ। नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गरी सञ्‍चालन हुने निकायको कार्यकारी तहमा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्‍चित गरिनेछ।
राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको माध्यमबाट महिला उद्यमशिलता विकास गरिनेछ। विपन्‍न महिलालाई सीपमूलक तालिम दिई आय आर्जनका क्रियाकलापमा संलग्न गराइनेछ। सबै स्थानीय तहमा महिला उद्यमशिलता सहजीकरण केन्द्र स्थापना गरिनेछ। दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।
विपन्‍न, दलित, आदीवासी, जनजाती, एकल महिला, अपाङ्गता भएका महिला, वादी, कमलरी, कमैया, चेपाङ्ग, राउटे, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत लगायत वञ्चितीकरणमा परेका सबै समुदायका महिला तथा किशोरीको आय आर्जन, क्षमता विकास र सशक्तिकरणका कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।
बालबालिकाको मानसिक र शारिरीक विकासका लागि पोषणयुक्त खाना, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, खेलकुद तथा मनोरञ्जनका अवसर प्रदान गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा 15 स्थानमा बालउद्यान तथा बाल मनोरञ्‍जन स्थल निर्माण गरिनेछ।
विद्यमान कृषि अनुदान प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी कृषक, कृषि उद्यमी, कृषक समुह र सहकारी संघ संस्थालाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान प्रदान गरिनेछ। इजाजत प्राप्त विक्रेताबाट उन्‍नत बीऊ खरिद गरी रोपण गर्ने कृषकलाई मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु। कृषिको यान्त्रिकरणका लागि कृषि औजार तथा कृषि उपकरण र सोको पार्टपुर्जाको आयातमा दिइएको कर तथा महसुल छुटको दायरा तथा प्रतिशत वृद्धि गरेको छु।
खेतीबाली लगाउने समय अगावै रासायनिक मलको पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्‍चित गरिनेछ। तीन वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने गरी प्रारम्भिक कार्य अघि बढाउन बजेट छुट्याएको छु। रासायनिक मलमा प्रदान गरिने अनुदानलाई वृद्धि गरी रु. 12 अर्ब पुर्‍याएको छु।
प्रदेश तथा स्थानीय तह मार्फत मेचीनगर, रङ्गेली, रत्ननगर, कागेश्‍वरी मनहरा, सन्धिखर्क लगायतका 17 स्थानमा कृषि थोकबजार स्थापना गरिनेछ। सल्यानको कपुरकोट र डोटीको सिलगढीमा कृषि थोकबजार स्थापना गर्न पूर्व तयारीका कार्य गरिनेछ। काठमाण्डौको चोभारमा निर्माणाधिन फलफूल तथा तरकारी हाटबजार सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ। कृषि उत्पादनलाई ढुवानी गर्न कृषि रज्जुमार्ग निर्माण गर्न स्थानीय तह तथा कृषि सहकारीलाई ५० प्रतिशत पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ।
उत्पादक किसानले कृषि उपजको यथार्थ मूल्य प्राप्त गर्ने सुनिश्चितताको लागि मध्यस्थकर्ताको अनुचित नाफालाई नियन्त्रण गरिनेछ। कृषकलाई बीऊ बिजन तथा मलको उपलव्धता, मौसम र सबै प्रकारका कृषि उपजको बजार मूल्य सम्बन्धी जानकारीमूलक सूचना मोबाईल एप्स मार्फत नियमित रुपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
कृषि अनुसन्धानमा लगानी वृद्धि गरिनेछ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदबाट अन्नवाली, तरकारी तथा फलफूलका वर्णशंकर जात विकास गरिनेछ। रैथाने प्रजातिका बीऊ बिजन र नश्ललाई संरक्षण गर्न विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरिनेछ। कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि प्रत्येक दुई दुई वर्षमा बीऊ फेर्न किसानलाई उत्प्रेरित गरिनेछ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको लागि रु.3अर्ब विनियोजन गरेको छु।
कृषि उत्पादनमा आधुनिक प्रविधिको सैद्धान्तिक एवम् व्यवहारिक ज्ञान प्रदान गर्न दुई वर्षभित्र झापाको चन्द्रडाँगी, सर्लाहीको नवलपुर लगायत सबै प्रदेशका एक-एक कृषि फार्मलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रुपमा विकास गरी सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ। ‘अव कोहि भोकै पर्दैन,भोकले कोहि मर्दैन’ भन्‍ने सरकारको संकल्पलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न भूमिहिन किसान, दलित र आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले पछाडि परेका वर्ग र समुदायमा खाद्य एवम् पोषणको पहुँच विस्तार गरिनेछ। भोकमरी तथा खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका व्यक्ति, परिवार, वर्ग र समुदायलाई खाद्यान्‍न उपलव्ध गराई भोकमरी अन्त्य गरिनेछ।
सिक्&zwj;टा सिँचाइ आयोजनाको पश्‍चिम मूल नहरबाट थप2हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याइनेछ। आयोजनाको पूर्वि खण्डमध्ये आगामी वर्ष थप 20 किलोमिटर मूलनहर र 12 किलोमिटर शाखा नहर निर्माण सम्पन्‍न गरी थप ६ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको सम्पूर्ण निर्माण कार्य आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्‍न गरिनेछ। यसका लागि रु. 1 अर्ब 56 करोड छुट्याएको छु।
निर्माणाधिन भेरी-बबई पथान्तरण वहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवर्क्स निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्‍न गरिनेछ। दुई वर्षभित्र बाँके र बर्दिया जिल्लाका थप 15 हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्नुका साथै 48 मेगावाट क्षमताको विद्युतगृह निर्माण सम्पन्‍न गरिनेछ। यस आयोजनाका लागि रु.3अर्ब7करोड विनियोजन गरेको छु। नौमुरे वहुउद्देश्यीय नदी पथान्तरण आयोजनाको डिपिआर तयार गरी निर्माण शुरु गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।
आगामी आर्थिक वर्ष समृद्ध तराई-मधेस सिँचाइ विकास कार्यक्रम अन्तर्गत झापा, सप्‍तरी, उदयपुर, चितवन, नवलपरासी पूर्व, दाङ्ग, बर्दिया, कञ्चनपुर लगायत 25 जिल्लाको 20 हजार हेक्टर खेतीयोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न5हजार स्यालो ट्यूववेल र2सय डिप ट्यूववेल जडान गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रु.2अर्ब 34 करोड विनियोजन गरेको छु।
एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत सुनकोशी, त्रिशुली, कालीगण्डकी, राप्ती, भेरी, कर्णाली र चमेलिया लगायतका नदी किनारका टार तथा फाँटमा लिफ्टिङ्ग गरी ६ सय हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको छु।
पहाडी क्षेत्रका कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन स्थानीय तह र समुदायको सहभागितामा पोखरी निर्माण गरिनेछ। यसका लागि स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तण गरिनेछ। नदी नियन्त्रण तथा जलाधार संरक्षण
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि रु. ८ अर्ब २१ करोड विनियोजन गरेको छु । वन विकास :
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत शिवालिक तथा महाभारत क्षेत्रमा2सय पोखरी निर्माण गरी भूमिगत जलपुनर्भरण गरिनेछ। चुरे क्षेत्रका 1 सय 64 नदी प्रणालीमा भूक्षय नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रू 1 अर्ब 53 करोड विनियोजन गरेको छु।
भक्तपुरको सूर्यविनायकमा निर्माणाधिन राष्ट्रिय प्राणी उद्यान र तनहुँमा भानुभक्त प्राणी उद्यानको निर्माण कार्य सम्पन्‍न गरिनेछ। सबै प्रदेशमा प्रादेशिक तहका प्राणी उद्यान स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट छुट्याएको छु।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयतर्फ रु. 27 अर्ब 47 करोड विनियोजन गरेको छु।
औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण तर्फ रु.2अर्ब 77 करोड विनियोजन गरेको छु वाणिज्य :
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि रु. 13 अर्ब 58 करोड विनियोजन गरेको छु । आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
अब म शिक्षा, खानेपानी लगायत सामाजिक क्षेत्रतर्फका कार्यक्रम र विनियोजन प्रस्तुत गर्दछुः गुणस्तरीय शिक्षा :
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई शैक्षिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रीत गरिनेछ। तीन वर्षभित्र सबै तहका सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसको कक्षा कोठा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खानेपानी तथा शौचालय लगायत वैकल्पिक सिकाई विधि अनुकूलका भवन तथा पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। आगामी वर्ष प्राथमिकताको आधारमा 1 हजार5सय सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसको भौतिक पूर्वाधार निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ। यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा क्रान्तिकारी परिवर्तन हुने, देश सुहाउँदो दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरण गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्‍वास लिएको छु। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि रु. 10 अर्ब विनियोजन गरेको छु।
बालबालिकाको पोषण स्तरमा सुधार ल्याउन र शैक्षिकसत्र पूरा नगरी बीचमा नै कक्षा छोड्ने समस्या समाधान गर्न सार्वजनिक विद्यालयका कक्षा ५ सम्मका सबै बालबालिकालाई दिवाखाजा कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्न रु. 8 अर्ब 73 करोड विनियोजन गरेको छु। यसबाट देशभरका 35 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछन्।
चेपाङ्ग, राउटे, बादी, माझी, मुसहर लगायत आर्थिक सामाजिक रुपमा सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सहिद परिवार, द्वन्द पिडित, कोभिड- 19 को संक्रमणबाट मृत्यु भएका परिवारका छात्रछात्रा तथा एचआईभि एड्स संक्रमित बालबालिकाको शिक्षा प्राप्तिको अधिकारको संरक्षण गर्न छात्रवृत्तिका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। दलित, मुस्लिम महिला तथा मुक्त कमलरी महिला विद्यार्थीका लागि सबै विषयमा उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने र निःशुल्क शिक्षा सुनिश्‍चित गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
दृष्टिविहिन बालबालिकालाई ब्रेल पाठ्यपुस्तक लगायत आधुनिक प्रविधिको सहायताबाट शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। वौद्धिक अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि आवासीय सुविधा सहित प्रत्येक प्रदेशमा एक-एक विशेष विद्यालय स्थापना गरी सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ।
विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोगलाई राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण, मापदण्ड निर्धारण तथा विश्‍वविद्यालयको अनुगमन र नियमन गर्ने सवल र सक्षम निकायमा विकास गरिनेछ। विश्‍वविद्यालयलाई प्रदान गरिने अनुदान कार्यसम्पादनमा आधारित बनाइनेछ। विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत वितरण हुने अनुदान वृद्धि गरी रू 18 अर्ब 34 करोड पुर्याएको छु।
आगामी वर्ष सुदुरप;चिम प्रदेशको गेटामा निर्माणाधिन मेडिकल कलेज सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ। बुटवल मेडिकल कलेजको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। प्रदेश नं2को बर्दिबास र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न जग्गा प्राप्ती र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिनेछ।
इतिहासको अध्ययन, अन्वेषण र खोज गरी भौगोलिक, राजनीतिक, साँस्कृतिक एवम् सामाजिक पक्षमा प्रामाणिकता स्थापित गर्न क्रियाशील रहेको इतिहास संसोधन मण्डललाई सवल बनाउन रकम उपलब्ध गराइनेछ। काठमाण्डौको जगडोलमा युनेस्को ग्राम निर्माण गरिनेछ। विज्ञान प्रविधि :
विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा विश्वस्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्न स्थापित मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्‍वविद्यालय आगामी वर्ष सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ। मकवानपुरको चित्लाङ्गमा इन्जिनियरिङ्ग संकायको पूर्वाधार निर्माण कार्य सम्पन्‍न गरिनेछ। काभ्रेको पाँचखालमा पूर्वाधार निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य आरम्भ गरिनेछ। यसका लागि रु. 1 अर्ब 55 करोड रकम विनियोजन गरेको छु।
परम्परागत सँस्कृति एवम् पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण र सम्बर्द्धन गरी सफ्ट पावरको रुपमा विश्वसामु प्रस्तुत गरिनेछ। लुम्बिनी विकास गुरुयोजनाको बाँकी काम दुई वर्षभित्र सम्पन्‍न गरिनेछ। अन्तर्राष्‍ट्रिय स्तरका विख्यात योजनाविद्द्वारा लुम्बिनी, तिलौराकोट, रामग्राम र देवदह क्षेत्र समेटी वृहत लुम्बिनी विकास गुरुयोजना तयार गरिनेछ। यसका लागि रू 1 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरेको छु।
समुदायस्तरदेखि नै खेलकुदको विकास र विस्तार गरी शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ, सक्षम र अनुशासित नागरिक तयार गर्दै अन्तर्राष्‍ट्रिय जगतमा राष्ट्रको सम्मान अभिवृद्धि गर्न खेलकुद पूर्वाधार विकास, खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना, खेलकुद प्रशिक्षण सञ्‍चालन तथा प्रतिभावान खेलाडीलाई प्रोत्साहन प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
झापाको दमकमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मदन भण्डारी रङ्गशाला दुई वर्षभित्र सञ्‍चालनमा ल्याउने गरी निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ।
मोरङ्गको वैद्यनाथपुर, काठमाण्डौको मुलपानी, रुपन्देहीको भैरहवा, दाङको लमही, बाँकेको नेपालगञ्‍ज र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा क्रिकेट मैदान निर्माण सम्पन्‍न गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। आगामी वर्ष पोखरा रङ्गशाला निर्माण सम्पन्‍न गरिनेछ।
आगामी आर्थिक वर्ष नवौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पदक हासिल गर्न सम्भाव्य खेल पहिचान गरी प्रोत्साहन गरिनेछ। अन्तर्राष्‍ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालको सहभागिता वृद्धि गरिनेछ।
ग्रामीण क्षेत्र लक्षित खानेपानी आयोजना निर्माण शुरु गर्दा लागतको 1 प्रतिशत रकम उपभोक्ताले अग्रिम रुपमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गरेको छु। उपभोक्ता समूहद्वारा सञ्‍चालित खानेपानी आयोजनामा प्रयोग हुने विद्युत महशुल तथा डिमान्ड शुल्क पुरै छुट दिने व्यवस्था गरेकोछु।
खानेपानी मन्त्रालयका लागि रु. ४३ अर्ब 54 करोड छुट्याएको छु । आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्न र छरिएर रहेका बस्ती एकीकृत गरी खानेपानी, विद्युत, सडक लगायत विकासका आधारभूत पूर्वाधार पुर्‍याउन मोरङ्ग, धनुषा, सिन्धुपाल्चोक, पर्वत, अर्घाखाँची, हुम्ला, वैतडी लगायतका 41 जिल्लाका 86 स्थानमा एकीकृत बस्ती विकास गरिनेछ।
विर्तामोड-चन्द्रगढी, धरान-इटहरी, जनकपुर-ढल्केवर, बुटवल-भैरहवा, कोहलपुर-नेपालगञ्‍ज, अत्तरिया-धनगढी लगायतका नगरपालिकाहरूलाई मेगा सिटीमा विकास गरिनेछ। मेगासिटीको गुरुयोजना तर्जुमा गर्न अन्तर्राष्‍ट्रिय शहरी योजनाविद्को परामर्श सेवा लिइनेछ।
काठमाण्डौ उपत्यका भित्रका वागमती, विष्णुमती, इच्छुमती, कर्मनाशा, हनुमन्ते लगायतका नदीहरूको सफाई तथा सौन्दर्यकरण गर्न रु.3अर्ब 47 करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु। वागमती नदीको उद्गमस्थलको जलाधार संरक्षण तथा जलप्रवाहमा सुधार गर्न सुन्दरीजलमा नागमती बाँध निर्माण गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेकोछु।
काठमाण्डौको नारायणहिटी संग्रहालयदेखि दशरथ रङ्गशालासम्मको क्षेत्रलाई अत्याधुनिक सेन्ट्रल पार्कमा विकास गरिनेछ। यस अन्तर्गत भूमिगत पार्किङ्ग सहितको खुलामञ्च, रमणीय बगैंचा र प्रदर्शनीस्थल सहितको भृकुटीमण्डप, रानीपोखरी, रत्नपार्क, टुँडिखेल, सुन्धारा, भद्रकाली र दशरथ रङ्गशालालाई समेत समेट्ने गरी आधुनिक पूर्वाधार विकास गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।
भूकम्पबाट क्षति भएका राष्ट्रपति भवन, ववरमहल, बालमन्दिर, केशरमहल, हरिहरभवन, त्रिचन्द्र कलेज लगायतका महत्वपूर्ण भवन तथा पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण तथा प्रवलीकरण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष 39 स्थानमा एकीकृत बस्तीको निर्माण कार्य सम्पन्‍न गरिनेछ।
दुरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधार गरिनेछ। आगामी श्रावण 1 गतेदेखि मोवाइल डिभाइस म्यानेज्मेन्ट सिस्टम सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ। यसबाट अवैध मोवाइल सेटको प्रयोग नियन्त्रणमा आउनुका साथै मोवाइलको प्रयोग गरी हुने अपराधिक गतिविधि समेत नियन्त्रण हुने विश्‍वास लिएकोछु।
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि रु.7अर्ब 74 करोड विनियोजन गरेको छु । आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, पुँजी र प्रविधिलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्न नेपाल सरकारको समेत लगानीमा स्थापित एनआरएन कोषलाई पूर्वाधार विकासमा उपयोग गरिनेछ। गैरआवासीय नेपालीको छुट्टै पहिचान दिने एनआरएन स्मार्ट कार्ड वितरण गरिनेछ। ब्रेन गेन सेन्टरलाई क्रियाशील बनाई विदेशमा विशेषज्ञता एवम् विशिष्टता हासिल गरेका नेपालीको ज्ञान राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गरिनेछ।
राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोवल बढाई सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। निजामती कर्मचारीको रु. १० लाखको सामूहिक दुर्घटना बीमा र रु. 1 लाखको स्वास्थ्य बीमा प्रिमियम वापतको रकम नेपाल सरकारले व्यर्होने व्यवस्था मिलाएको छु।
राष्ट्रसेवकलाई सहुलियतदरमा आवास सुविधा प्रदान गर्न कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट सबै प्रदेशमा सामूहिक आवास निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई गुणस्तरीय शिक्षाको अवसर प्रदान गर्न सबै प्रदेशमा निजामती विद्यालय स्थापना गरिनेछ। प्रदेशसँगको साझेदारी र सहकार्यमा धनकुटा र दिपायलमा सञ्‍चालित निजामती विद्यालयको स्तरोन्‍नति गरिनेछ। निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई प्रदेशगतरुपमा प्रतिस्पर्धा गराई स्नातक र सो भन्दा माथिल्लो तहको अध्ययनका लागि रु. ५ लाखसम्म छात्रवृत्ति उपलव्ध गराइनेछ।
भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशिलताको नीतिलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्दै शासकीय स्वच्छता कायम गरिनेछ। म भ्रष्टाचार गर्दिन, म भ्रष्टाचार हुन दिन्‍नँ, म देश र जनताका लागि इमान्दार भएर काम गर्नेछुभन्‍ने प्रतिज्ञा पूर्णरुपमा लागू गरिनेछ।
सार्वजनिक सेवालाई सर्वसुलभ, छरितो र प्रविधिमैत्री बनाइनेछ। सेवाग्राहीको पृष्ठपोषण लिने पद्धतिलाई संस्थागत गरिनेछ। नागरिकबाट प्राप्त गुनासोको तत्काल समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रमुख पदाधिकारी तथा आयोजना प्रमुखसँग परिमाणात्मक तथा मापनयोग्य सूचक सहित कार्यसम्पादन सम्झौता गरिनेछ।
पूर्वाधार आयोजनाको गूणस्तर अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र मार्फत प्राविधिक परीक्षणको दायरा विस्तार गरिनेछ।आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
जग्गा प्राप्तिमा हुने ढिलाई तथा विवादको कारणबाट विकास आयोजना अवरुद्ध हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न जग्गा अधिग्रहण गर्दा छरितो, पारदर्शी, सहज र अनुमानयोग्य प्रक्रिया अवलम्बन गरिनेछ। मुआब्जा निर्धारण गर्दा जग्गामा रहेका लिगपातको मूल्य लगायत सबै प्रकारको क्षतिपूर्ति वापत अघिल्लो आर्थिक वर्ष स्थानीय तहबाट कर प्रयोजनको लागि कायम भएको सरकारी मूल्याङ्कनको तीन गुणा भन्दा बढी नहुने कानूनी व्यवस्था गरिनेछ।
विप्रेषणको आम्दानी बैंकिङ्ग प्रणालीबाट भित्र्याई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले मोबाइल वालेटबाट सहजरुपमा स्वदेशमा रकम पठाउन सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। बैकिङ्ग प्रणालीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती खातामा जम्मा गरेमा थप एक प्रतिशत व्याज रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायत सम्झौतित दीर्घकालिन कोषलाई उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आधुनिक पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक पुनरूत्थानका क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण र जोखिम न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय रणनीतिको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट रु. 10 खर्ब 24 अर्ब 90 करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु. 63 अर्ब 37 करोड व्यहोरिनेछ। चालु, पुँजीगत र वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ विनियोजित खर्चमा राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट व्यहोर्दा रु.5खर्ब 59 अर्ब 30 करोड न्यून हुने देखिन्छ। वित्तीय व्यवस्था तर्फको विनियोजित रकम समेत समावेश गर्दा कुल विनियोजनमा न्यून हुने रकम मध्ये वैदेशिक ऋणबाट रु.3खर्ब9अर्ब 29 करोड र आन्तरिक ऋणबाट रु.2खर्ब 50 अर्ब व्यहोरिनेछ। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,
राजस्व प्रशासनको दक्षता वृद्धि, पूर्वाधार विकास एवम् सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोगबाट स्वेच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
अन्त:शुल्क स्टिकर प्रयोग गर्दा क्यूआरकोड स्क्यान गरी सोको तथ्याङ्क आन्तरिक राजस्व विभागको स्वचालित प्रणालीमा अभिलेख गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ। वियरको उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानहरुमा फ्लो मिटर राख्‍ने व्यवस्था गरिनेछ। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
आगामी आर्थिक वर्ष कोभिड महामारीको नियन्त्रणमा सफलता प्राप्त हुने, खोप अभियानले पुर्णता पाउने, स्वास्थ्य पूर्वाधारमा आमुल सुधार हुने, रणनीतिक महत्वका ठुला आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढने, सडक सन्जाल विस्तार हुने, सबै नेपालीको घरमा आधुनिक ऊर्जाको पहुँच विस्तार हुने, शिक्षण सिकाईमा सूचना प्रविधिको विस्तार हुने, थप दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्‍चालनमा आई शीघ्र आर्थिक पुनरूत्थान हुने अपेक्षा गरेको छु।
धेरै प्रकारका असहजता र प्रतिकूलताका वावजुद वर्तमान् सरकारले लिएका नीतिको कार्यान्वनबाट नेपाली जनतामा सिर्जना भएको उत्साह तथा आर्थिक तथा सामाजिक विकासको लयलाई कायम राख्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न ठोस योगदान पुर्‍याउने मेरो विश्वास छ। कोरोनासँग डटेर जुध्नुपर्ने यस सङ्कटको घडीमा राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संघ संस्था, निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाजलाई आ-आफ्नो ठाँउबाट सकारात्मक योगदान गर्न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
बजेट तर्जुमा गर्दा मार्गदर्शन गर्नु हुने सम्माननीय राष्ट्रपति, सम्माननीय उपराष्ट्रपति, सम्माननीय प्रधानमन्त्री, सम्माननीय प्रधानन्यायधिश, प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख र राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। बजेट तर्जुमाको क्रममा उपयोगी सुझाव प्रदान गर्नु हुने राजनीतिक दल, अर्थविद्, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र नागरिक तथा आम सञ्‍चार जगतलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। नेपालको आर्थिक, सामाजिक विकासमा निरन्तर सहयोग पुर्‍याउने सबै करदाता र कठिन अवस्थामा समेत नेपाललाई निरन्तर सहयोग गर्ने विकास साझेदारहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।बजेट कार्यान्वयनमा सबैको रचनात्मक सहयोग रहने अपेक्षा समेत गरेको छु।
अन्त्यमा, स्वास्थ्य सावधानी अपनाई कोभिड- १९ महामारीको जोखिमबाट सुरक्षित रहदै देश विकासको अभियानमा सहभागी हुन सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई हार्दिक आह्वान गर्दछु। धन्यवाद।
बजेट वक्तव्य 2078
कुन कुन शीर्षकमा गरियो कर छूट